Goobta lagu qabanayo doorashada gudoonka golaha shacabka oo la shaaciyey - Caasimada Online
Home Warar Goobta lagu qabanayo doorashada gudoonka golaha shacabka oo la shaaciyey
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka Guddoonka Golaha Shacabka Xildhibaan Cabdirisaaq Cumar Maxamed ayaa shaaca ka qaaday goobta la qorsheeyey in lagu qabto doorashada guddoonka golaha shacabka.
Cabdirisaaq ayaa sheegay in Shaqadii loo igmaday ee doorashooyinka Guddoonka intooda badan ay soo geba-gabeeyeen, isaga oo intaas ku daray in dhamaan musharrixiinta guddoonka Golaha Shacabka ay khudbadahooda musharraxnimo jeediyeen, wuxuuna xusay in shaqada hadda harsan ay tahay in la qabto doorashada guddoonka.
Guddoomiye Cabdirsaaq oo Warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay in doorashada Guddoonka Golaha Shacabka laga bedelay halkii ay ka dhici laheyd ee Xarunta Villa Hargeysa loona bedelay hoolka Afisiyooni.
Sababta looga badalay Villa Hargeysa ayuu ku sheegay inay tahay in munaasabadda ay kasoo qeyb geli doonaan mas’uuliyo badan sidaas darteedna loo baahan yahay meel wada deeqi karta sida uu hadalka u dhigay.
Dhawaan ayuu guddoomiyaha sheegay in kulamadii ugu dambeeyey ay xarunta ka dhaceen falal amni darro sida hoobiyeyaal lagu soo tuuray dhismaha Villa Hargeysa, xilli uu socday kulanka Baarlamaanka iyo shalay oo ay ugu dambeysay oo xabad ay ku dhacday Qaboojiyaha.
Doorashada guddoomiyaha oo ay isku soo taageen illaa 8 murashax ayaa la filayaa in la qabto 27-ka bishan, si dardar geliyo dhammeystirka doorashada Soomaaliya ee 2022-ka.